၁။ 3094 အရက်ဆီထုတ်လုပ်သောစက်ရုံမှ စွန့်ပစ်ရေများကို အသုံးပြု၍ Greenhouse အဆင့် Nannochloropsis Sp. မိုက်ခရိုအယ်လ်ဂျေးစိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် သန့်စင်ခြင်း
၂။ 3076 ချည်ထည်ဆိုးဆေးခိုင်မြဲမှု အရည်အသွေးမြှင့်တင်ခြင်း
၃။ 3075 သဘာ၀ Micro algae မှ Biodiesel စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ခြင်း
၄။ 3051 စွန့်ပစ်ဆီကြမ်းမှ ဘိုင်အိုဒီဇယ်စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ခြင်း
၅။ 3014 ပေါ့ပါးခိုင်ခံ့သော ကွန်ကရစ်တွင် ထည့်သွင်းအသုံးပြုသည့် ပရိုတင်းအမြုပ်ထဓာတ်ဆေးစမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ခြင်း
၆။ 3004 မြူနီစီပါယ် ပလတ်စတစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်း (Plastic Waste)မှ ဒီဇယ်လောင်စာ (Diesel Fuel)စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ခြင်း
၇။ 2999 Herbal Soap နှင့် Antiseptic Soap ကို Palm Oil ဘေးထွက်ပစ္စည်း(Fatty Acid)မှ စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ခြင်းသုတေသန
၈။ 2955 လျှပ်စစ်စွမ်းအင် 12 volt ထုတ်ပေးနိုင်သော Fuel Cell စမ်းသပ်တည်ဆောက်ခြင်း
၉။ 2951 Producer gas ထုတ်လုပ်ရာတွင် Gasifier များမှ ထွက်ရှိသော ကတ္တရာဖယ်ထုတ်ရန် (Tar Removol)အတွက် လိုအပ်သော Catalyst များ စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ခြင်း
၁၀။ 2924 သဘာ၀အမျှင်များမှ ထုတ်လုပ်ရရှိသော နိုက်တြိုဆယ်လူးလို့စ်ကို အသုံးပြု၍ အလွှာပါး (Membrane) စမ်းသပ်ပြုလုပ်ခြင်း
၁၁။ 2916 သဘာ၀အမျှင်များမှ ထုတ်လုပ်ရရှိသော Cellulose Acetate ကို အလွှာပါး (Membrane) ပြုလုပ်၍ ရေသန့်စင်မှုနည်းစဥ်နှင့်အသုံးပြုခြင်း
၁၂။ 2910 သဘာ၀အမျှင်များမှ Cellulose Membrane ပြုလုပ်ခြင်း
၁၃။ 2899 လျှပ်ကာပစ္စည်း၏မျက်နှာပြင်နှစ်ဖက်ပေါ်တွင် Copper ကပ်တင်ခြင်း (Two Layer Copper Plating on Insulation Sheet) အား ဓာတ်ခွဲခန်းအဆင့် စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်မှုအစီရင်ခံစာ
၁၄။ 2895 HPLC grade အီသိုင်းအက်ဆီတိတ် စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ခြင်းသုတေသန
၁၅။ 2888 စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုသည့်ပိုးသတ်ဆေးနှင့် ရွက်ဖြန်းဆေးများ အတွက် ရွက်ကပ်ဆေး (Spreader and Binder) စမ်းသပ်ပြုလုပ်ခြင်း အစီရင်ခံစာ
၁၆။ 2876 စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုသည့်ပိုးသတ်ဆေးနှင့် ရွက်ဖြန်းဆေးများ အတွက် ရွက်ကပ်ဆေး (Spreader and Binder) စမ်းသပ်ပြုလုပ်ခြင်း အစီရင်ခံစာ
၁၇။ 2875 ပြည်တွင်းဖြစ်ရှာလကာရည် Acetic Acid မှ Aceton ထုတ်လုပ်ခြင်း
၁၈။ 2852 မြေပဲခွံ၏ ရုပ်ဂုဏ်သတ္တိ၊ ဓာတ်ဂုဏ်သတ္တိနှင့်အသုံးပြုနိုင်မှုကိုလေ့လာခြင်း
၁၉။ 2850/ 2851 ‌မြေပဲခွံမှ ဓာတ်ကြွမီးသွေးပြုလုပ်နိုင်မှုကိုလေ့လာခြင်းအစီရင်ခံစာ
၂၀။ 2849 ဆီးဆံမှ အသုံး၀င်ဓာတုဒြပ်ပေါင်းထုတ်လုပ်နိုင်မှုလေ့လာနိုင်ခြင်း
၁။ 3118 မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းလျှပ်စစ်မီးပေးလျက်ရှိသော Gasifier များအတွက် ရေသန့်စင်သောစနစ်သုတေသနပြုလုပ်ခြင်းအစီရင်ခံစာ
၂။ 3116 ကျိုက်ထီးရိုးတောင်ပေါ်တွင်အမှိုက်မီးရှို့စက်တည်ဆောက်ခြင်းသုတေသန လုပ်ငန်းအစီရင်ခံစာ
၃။ 3115 Green House ပုံစံ နေရောင်ခြည်သုံးအခြောက်လှန်းခြင်းသုတေသနလုပ်ငန်း ပြီးစီးမှုအစီရင်ခံစာ
၄။ 3114 အများပြည်သူသုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင်အထောက်အကူပြုစေမည့် Intelligent Bus System (IBS)စနစ်ကို သုတေသနပြုလုပ်တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းအစီရင်ခံစာ
၅၊ 3101 Design & Construction of Phase Change Material Based Solar Thermal Water Heating System တည်ဆောက်ခြင်းသုတေသန အစီရင်ခံစာ
၆။ 3093 Helical Savonious Wind Turbine စမ်းသပ်တည်ဆောက်ခြင်းသုတေသန လုပ်ငန်းအစီရင်ခံစာ
၇။ 3092 အသေးစားရေအားလျှပ်စစ်လုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုနိုင်သော Electronic Load Controller (5 KW) တည်ဆောက်ခြင်းသုတေသနလုပ်ငန်းအစီရင်ခံစာ
၈။ 3091 အများပြည်သူလုံခြုံရေး (Public Safety) အတွက် Surveillance ဗွီဒီယိုကို အသုံးပြု၍ လူများ၏လှုပ်ရှားမှုကို အလိုအလျောက်စောင့်ကြည့်စိစစ်သော စနစ်(automatic detection system) တည်ဆောက်ခြင်းသုတေသန လုပ်ငန်းအစီရင်ခံစာ
၉။ 3090 Automobile Industry ၏Assembly Line တွင် အသုံးပြုသော Speed Control Process များအတွက် On Chip Controller Design ပြုလုပ် တည်ဆောက်ခြင်း
၁၀။ 3088 လက်ရှိ10 KW Gasifier အား Rosource Efficient Cleaner Production (RECP)နည်းစနစ်ဖြင့် အဆင့်မြှင့်ပြုပြင်တည်ဆောက်၍ Gasifier သင်တန်းများ Training Kit အနေဖြင့် အသုံးပြုနိုင်စေရန် သုတေသနပြုလုပ်ခြင်းအစီရင်ခံစာ
၁၁။ 3088 လေအားလျှပ်စစ်နှင့်ရေအားလျှပ်စစ်တာဘိုင်များအတွက် Induction Motor မှ Generator သို့ ပြောင်းလဲတည်ဆောက်ခြင်းသုတေသနလုပ်ငန်း အစီရင်ခံစာ
၁၂။ 3087 Hydro Concrete Turbine (1KW) စမ်းသပ်တည်ဆောက်ခြင်းသုတေသန လုပ်ငန်းအစီရင်ခံစာ
၁၃။ 3086 1.5 m3 Fiber Type Biogas Digester စမ်းသပ်တည်ဆောက်ခြင်း သုတေသနလုပ်ငန်းအစီရင်ခံစာ
၁၄။ 3085 စွမ်းအားမြှင့်မီးဖိုတည်ဆောက်ခြင်းသုတေသန
၁၅။ 3060 တစ်အိမ်ထောင်သုံး Biogas engine စမ်းသပ်တည်ဆောက်ခြင်းသုတေသန လုပ်ငန်းအစီရင်ခံစာ
၁၆။ 3059 High Pressure ခံနိုင်သော HDPE (sheet type) Digester စမ်းသပ် တည်ဆောက်ခြင်းသုတေသနလုပ်ငန်းအစီရင်ခံစာ
၁၇။ 3058 1 KW Cross Flow Turbine စမ်းသပ်တည်ဆောက်ခြင်းသုတေသနလုပ်ငန်း အစီရင်ခံစာ
၁၈။ 3057 Design and Construction of Charge Controller for Solar System Irrigation တည်ဆောက်ခြင်းသုတေသနလုပ်ငန်းအစီရင်ခံစာ
၁၉။ 3056 Design and Construction of Wind Pumping System တည်ဆောက်ခြင်းသုတေသနလုပ်ငန်းအစီရင်ခံစာ
၁။ 3094 ကင်ဆာရောဂါ အတွက် အသုံးပြု၍ ရနိုင်သော မင်းကွက်သီးမှ Mangostinဒြပ်ပေါင်းထုတ်ယူခြင်း သုတေသနလုပ်ငန်းအစီရင်ခံစာ။
Microalgae များတွင်ပါဝင်သော chlorophyll နှင့် Fatty acid ပါဝင်မှုကို စမ်းသပ်လေ့လာခြင်းသုတေသနလုပ်ငန်းအစီရင်ခံစာ။
၂။ 3061 ပင်လယ်ရေညှိ Microalgae (Nannochloropsis spp) မှ Omega-3 Fatty acid ထုတ်ယူခြင်းသုတေသနလုပ်ငန်းအစီရင်ခံစာ။
သဘာဝအင်တီအောက်ဆီးဒင့်ဖြည့်စွက်ဆေး ( Natural Antioxidiant Supplement Medicine) စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ခြင်း သုတေသနလုပ်ငန်း အစီရင်ခံစာ။
၃။ 3031 မြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေးထုတ်ကုန်အချို့နှင့် ဆေးပင်များ၏ အင်တီအောက်ဆီးဒင့် ဂုဏ်သတ္တိကိုလေ့လာစမ်းသပ်ခြင်းသုတေသန။
၄။ 3055 ငှက်ဖျားရောဂါကုသနိုင်သည့် တိုင်းရင်းဆေးတစ်မျိုးကို မှတ်ပုံတင်နိုင်ရန် စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ခြင်း။
၅။ 3003 ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးစမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ခြင်း
၆။ 3002 မြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေးပင်များ၏ Plasmodium Falciparum ငှက်ဖျားပိုးအမျိုးမျိုး အပေါ်အာနိသင်သက်ရောက်မှုကို စမ်းသပ်ခြင်း။
၇။ 3001 ဆေးပင်များ၏ အင်တီအောက်ဆီးဒင့် ဂုဏ်သတ္တိကိုလေ့လာစမ်းသပ်ခြင်း။
၈။ 2961 မြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေးပင်များအား စံငှက်ဖျားပိုး Plasmodium Falciparum အပေါ်အာနိသင်သက်ရောက်မှု။
၉။ 2957 ကင်ဆာရောဂါနှင့် ဘတ်တီးရီးယား ပိုးမွှားရောဂါတို့ကို ကုသနိုင်သော ရဲယိုသီး မှ ဒြပ်ပေါင်းများ ထုတ်ယူခြင်း သုတေသန။
၁၀။ 2947 ဆီးချိုရောဂါအတွက် အသုံးပြုနိုင်မည့်အစွမ်းထက်သော မြန်မာဆေးဖက်ဝင်အပင်များအား ရှာဖွေလေ့လာ၍ ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း။
၁၁။ 2946 ကင်ဆာရောဂါအတွက် အသုံးပြုနိုင်မည့်အစွမ်းထက်သော မြန်မာတိုင်းရင်းဆေးပင်များ ရှာဖွေလေ့လာ၍ ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း သုတေသန။
၁၂။ 2945 ငှက်ဖျားရောဂါကုသဆေးအဖြစ်အသုံးပြုရန်အလားအလာရှိသော မြန်မာဆေးဖက်ဝင်တိုင်းရင်းဆေးပင်များအား Standard Strain ငှက်ဖျားပိုး Plasmodium Falciparum K.1 အပေါ် အာနိသင်သက်ရောက်မှုကို စမ်းသပ်လေ့လာခြင်းသုတေသန။
၁၃။ 2940 တိုင်းရင်းဆေးပင်များ၏ Bioactivity စမ်းသပ်ခြင်း။
၁၄။ 2935 ကင်ဆာရောဂါအတွက်သဘာဝ မညှိုးပင်မှ အစွမ်းထက်သော ဒြပ်ပေါင်းများခွဲထုတ်ခြင်း။
၁၅။ 2934 ငှက်ဖျားဆေးစမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ငှက်ဖျားပိုးအပေါ် နှိမ်နင်းနိုင်မှု ရှိသော ဆေးအဆီ။
၁၆။ 2917 ငှက်ဖျားရောဂါအတွက် အသုံးပြုနိုင်မည့်အစွမ်းထက်သော မြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေးပင်များကို ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်းသုတေသန။
၁၇။ 2834 သက်ရင်းကြီးသုတေသနလုပ်ငန်း။
၁၈။ 2833 ဗောက်လောက်ညိုသုတေသနလုပ်ငန်း။
၁၉။ 2832 တောနနွင်းမှ Curcumin ဒြပ်ပေါင်းထုတ်ယူလေ့လာခြင်းသုတေသန။
၂၀။ 2831 ဒဟတ်ခေါက်သုတေသနလုပ်ငန်း။
၂၁။ 2830 ကြက်ဟင်းခါးသီးမှ ပရိုတင်းဒြပ်ပေါင်းထုတ်ယူ လေ့လာခြင်းသုတေသန။
၂၂။ 2829 ရဲယိုသီးမှ အယ်လ်ကွာလွိုက်ဒြပ်ပေါင်းထုတ်ယူလေ့လာခြင်းသုတေသန။
၂၃။ 2828 ဆေးခါးကြီးရွက်မှ ငှက်ဖျားပျောက်ဆေးထုတ်ယူလေ့လာခြင်းသုတေသန။
၂၄။ 2827 မြက်မုန်ညှင်းဥ မှ အာနိသင်ဒြပ်ပေါင်းများထုတ်ယူ ခြင်းနှင့်ငှက်ဖျားရောဂါပိုးအပေါ်စမ်းသပ်ခြင်း သုတေသန။
၂၅။ 2365 လက်ဖက်စိုကို လက်ဖက်ခြောက်အဖြစ်ပြုပြင် ထုတ်လုပ်ရာတွင် ထွက်ရှိလာသည့်အရည်များမှ coffein ကို စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ြခင်း။
၂၆။ 2447 Xylose သကြားထုတ်လုပ်ခင်း
ဆင်တုံးမနွယ် (Tinorpora cordifolia) အပင်တွင်ပါဝင်သော ဓါတုဒြပ်ပေါင်း
ရေခရာ (Acanthus ilicifolius) အပင်တွင်ပါဝင်သောအာနိသင်ဓါတ်။
၂၇။ 2826 တိုင်းရင်းဆေးပင်များ၏ Bioactivity စမ်းသပ်ခြင်းသုတေသန။
၂၈။ 2365 လက်ဖက်စိုကို လက်ဖက်ခြောက်အဖြစ်ပြုပြင် ထုတ်လုပ်ရာတွင် ထွက်ရှိလာသည့်အရည်များမှ coffein ကို စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ခင်း။
၂၉။ 2227 ချဉ်စော်ကားသီးအားဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်းအစီရင်ခံစာ။
၁။ 3029 စပါးခွံပြာသုံးဘိလပ်မြေ စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ခြင်းသုတေသနလုပ်ငန်း အစီရင်ခံစာ။
၂။ 3028 အာဆင်းနစ်ပါဝင်သော သောက်သုံးရေများသန့်စင်ခင်း သုတေသန အစီရင်ခံစာ။
၃။ 3009 Basic Refractory Brick & Lining Materials စမ်းသပ်ခြင်း သုတေသန အစီရင်ခံစာ။
၄။ 2983 Prototype Paddy Silo using Long Grass Fiber Clay Composite စမ်းသပ်ပြုလုပ်ခြင်း
၅။ 2965 HV Ceramic Insulator Bushing ( ဗို့အားဖြင့် ဒဏ်ခံနိုင်သော ကြွေသီးဘူရှင် စမ်းသပ် ပြုလုပ်ခြင်း သုတေသနလုပ်ငန်း အစီရင်ခံစာ။
၆။ 2943 Insulating Lining materials စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ခြင်း သုတေသနလုပ်ငန်း အစီရင်ခံစာ။
၇။ 2931 General water Filter စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ခြင်း သုတေသနလုပ်ငန်း အစီရင်ခံစာ။
၈။ 2923 ဗြုံးမြေ Crushed Dolomite အသုံးပြု၍ Light Weight Roofing Tile စမ်းသပ်ပြုလုပ်ခြင်းသုတေသနလုပ်ငန်းအစီရင်ခံစာ။
၉။ 2919 Gypsum Ceiling Board စမ်းသပ် ပြုလုပ်ခြင်း သုတေသန အစီရင်ခံစာ။
၁၀။ 2915 Micro Clay-Concrete Roofing Tile အမိုးပြား (Double Roman Tile) ပုံစံပြုလုပ်ခြင်းသုတေသနလုပ်ငန်း။
၁၁။ 2907 Micro Clay Concrete (MCR) အမိုးပြား နှင့် Fiber Reinforced Concrete (FRC) အမိုပြားများပြုလုပ်ခြင်း သုတေသနလုပ်ငန်း အစီရင်ခံစာ။
၁၂။ 2894 Ceramic Dielectric Material Barium Titanate အား ဓါတ်ခွဲခန်းအဆင့် စမ်းသပ်ပြုလုပ်ခြင်း သုတေသနလုပ်ငန်း အစီရင်ခံစာ
၁၃။ 2891 စပါးခွံဖွဲပြာမှ ဆီလီကွန်စမ်းသပ်ထုတ်ယူခြင်း။
၁၄။ 2890 Ceramic Water Purifier စမ်းသပ်ပြုလုပ်ခြင်း သုတေသန လုပ်ငန်းအစီရင်ခံစာ
၁၅။ 2889 သောက်သုံးရေသန့်ရရှိရေးအတွက် ရေစစ် (Water Filter ) များစမ်းသပ် ပြုလုပ်ခြင်း။
၁၆။ 2885 ဓါတ်ခွဲခန်းအဆင့်ရှိ ဒိုင်အီသိုင်းအီသာစမ်းသပ် ထုတ်လုပ်ခြင်း။
၁၇။ 2844 Preparation of Synthetic Zeolites from Myanmar Clay Mineral
၁၈။ 2825 Softening of Water by Sulphonated Coal Ion Exchange
၁၉။ 2807 ဗို့အားဖြင့်လျှပ်စစ်ကြွေသီးစမ်းသပ်ပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း။
၂၀။ 2806 တန်( ၂၀) ကျ ဘိလပ်မြေစက်ရုံစမ်းသပ်တည်ဆောက်ခြင်း
၂၁။ 2799 Gyprum Plaster Ceiling Beard စမ်းသပ်ပြုလုပ်ခင်း။
၂၂။ 2798 ကျောက်ပတ်တီး ( Plaste of Paris Bandage) စမ်းသပ်ပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း
၂၃။ 2797 ပြည်တွင်းထွက်သန့်စင် ဂရက်ဖိုက်ကို အသုံးပြု၍ ခဲတံသုံး ခဲချောင်း စမ်းသပ်ပြုလုပ်ခြင်း။
၂၄။ 2796 Zinc Concentrate မှ Zinc သတ္တုစင်ထုတ်လုပ်ခြင်းသုတေသန
၂၅။ 2795 Copper Sulphate စမ်းသပ်ပြုလုပ်ခြင်းသုတေသနလုပ်ငန်း
၂၆။ 2794 ကြေးနီသန့်စင်မှ ကြေးနီသတ္တုစင်ထုတ်လုပ်သည့် Hydrometallugy နည်းများပြုလုပ်ခြင်း
၂၇။ 2793 ပြည်တွင်းထွက် ကုန်ကြမ်းများဖြင့် ပြုလုပ်သော ကြမ်းခင်းကျောက်ပြား ထုတ်လုပ်ခြင်း။
၂၈။ 2792 မြိုင်မြို့နယ်ရှိ အလူနိုက် ( Alunite) ကျောက်ဖြူမှ အလူမီနီယမ်ဆာလဖိတ် ထုတ်လုပ်ခြင်း။
၂၉။ 2791 အပူချိန်နိမ့်ကြွေထည်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်းသုတေသနလုပ်ငန်း
၃၀။ 2790 ကြွေသားမအက‌က် သောနံရံကပ်ကျောက်ပြားသုတေသနလုပ်ငန်း
၃၁။ 2789 သန့်ရှင်းရေးနှင့် ဆိုင်သော ကြွေထည်သုတေသနလုပ်ငန်း
၃၂။ 2788 ပြည်တွင်းထွက် ကုန်ကြမ်းများဖြင့် ပြုလုပ်သော vitreous china
၃၃။ 2787 သမိုင်းဥပစာကောလိပ်ဆောက်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသောဆောက်လုပ်ရေးအုတ်ချပ်များထုတ်လုပ်ရာတွင်ပေါ်ပေါက်သည့် ပြဿနာများ
၁။ 3094 သဘာဝသစ်တောထွက်ဝါးမှ သ‌ဘာဝ ပေါ်လီမာဝါးမျှင်များ စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ခြင်း။
၂။ 3061 ဇင့်အောက်ဆိုဒ် ပေါ်လီအနလင်းနာနိုကွန်ပိုစစ် အ‌ခြခံဓါတုစိုထိုင်းမှုတိုင်းကိရိယာ တည်ဆောက်ခြင်း။
၃။ 2971 အုန်းဆံမျှင်နှင့် အုန်းဆံမှုန့်များကို အသုံးပြု၍ မျက်မှာကျက်ချပ်ပြားများ စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ခြင်း။
၄။ 2953 Unsaturated Polyester Resinများ စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ခြင်း။
၅။ 2952 Artificial Marble Stab များ စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ခြင်း။
၆။ 2937 ၄’ ၃” အရှည်ရှိသော လေဒလက် (Wind Turbine Blade) များစမ်းသပ်ပြုလုပ်ခြင်း။
၇။ 2932 စပါးခွံပြာ (Rice Husk Ash) မှ Zeo Lite A စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ခြင်း။
၈။ 2930 သစ်သားအစားထိုးကွန်ပိုစစ်ချပ်ပြားများ စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ခြင်း။
၉။ 2922 Wind Turbine Bladesများကို ဖန်မျှင် (Glass Fiber)များအသုံးပြုရန် စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ခြင်း။
၁၀။ 2918 ဝါးပျော့ဖတ်ထုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံ၏ စွန့်ပစ်အရည်များမှ လစ်ဂနစ်ကော် စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ခြင်း
၁၁။ 2911 ဂုံလျှော်မျှင် အားဖြည့် ကွန်ပိုစစ်ချပ်ပြားများ စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ခြင်း။
၁၂။ 2908 ညမြင်ကိရိယာ Night Vision Devices ( NVD) ၏ ပလပ်စတစ်နှင့် ရာဘာပစ္စည်းများ စမ်းသပ်ပြုလုပ်ခြင်း
၁၃။ 2906 အချိုရည်ဖြည့်စက်တွင် အသုံးပြုသညိ့ Roller ( lift Cylinder )အား စမ်းသပ် ထုတ်လုပ်ခြင်း
၁၄။ 2905 လျှပ်စီးပတ်လမ်းများတည်ဆောက်ရာတွင် အသုံးပြုသော လျှပ်ကာချပ်ပြားများ စမ်းသပ်ပြုလုပ်ခြင်း
၁၅။ 2891 စပါးခွံ(Rice Hull) မှ Silicon ထုတ်ယူခြင်း။
၁၆။ 2883 သီဟိုသရက်စေ့ အခွံဆီအား အခြေခံသည့် သုတ်ဆေး ( Anti-Corrosive Paint) စမ်းသပ်ပြုလုပ်ခြင်း အစီရင်ခံစာ
၁၇။ 2878 ဝါးကွန်ပိုစစ်ချပ်ပြားများ (ဝါးချပ်ပြားများစမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ခြင်း)
၁၈။ 2847 ပလပ်စတတ်စွန့်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးအား ပြန်လည်အသုံးချခြင်း။
၁၉။ 2845 Circuit Board တွင် အသုံးပြုသော Insulator အမျိုးမျိုးစမ်းသပ်ပြုလုပ်ခြင်း
၁။ 3038 အရည်အသွေးမြှင့် နည်းပညာသုံး 40 KW Biomass Gasifier တည်ဆောက် စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ခြင်းသုတေသန။
၂။ 3010 Temperature Control for Biomass Gasifier
၃။ 2984 ကျေးလက်ဒေသအတွက် ( Ceramic Water Filter ) စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ခြင်း သုတေသန။
၄။ 2970 ရေဓါတ်ငွေ့ထုတ်စက် တည်ဆောက်၍ ၎င်းမှ ရရှိသော ရေဓါတ်ငွေ့ဖြင့် (TE) ဟီးနိုးအင်ဂျင်အားမောင်းနှင်၍ ဒီဇယ်ကုန်ကျမှု
လျော့နည်းအောင် စမ်းသပ်ခြင်း သုတေသန
၅။ 2949 ကျေးလက်နှင့်မြို့ပြဒေသသုံး တစ်လုံးထိုး လက်ဆွဲ 2KW Gasifier တည်ဆောက်ခြင်းသုတေသနလုပ်ငန်း။
၆။ 2944 Fluidized Gasifier ( 500 KW-20 MW)တည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက် ၎င်း၏ model ပုံစံငယ်အား သုတေသနပြုလုပ်ခြင်း။
၇။ 2898 သတ္တုလုပ်ငန်းသုံးချောဆီ (Metal Working Lubricants) စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ခြင်း။
၈။ 2896 ဓါတ်ခွဲခန်း အဆင့်စက်ချောရည် (သို့) ချောစာရည် ( Cutting Fluids ) စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ခြင်း။
၉။ 2839 ဥများ (ကြက်၊ဘဲ၊ငုံး) ကို အလုံးမပျက် ကြာရှည်ခံထားသို‌ရန် စမ်းသပ်ပြုလုပ်ခြင်း သုတေသန။
၁၀။ 2837 Removal of Sulphate from Hardwater ရေစေးမှ ဆာလဖိတ်ဓါတ်အားဖယ်ထုတ်ခြင်း။
၁၁။ 2445 ပဲပုတ်စေ့မှ အသားတိုး ( Textured Vegetable Protein Simulated Meat)စမ်းသပ်ပြုလုပ်ခြင်း အစီရင်ခံစာ
ပြောင်းဖူးစေ့မှ အီသိုင်းအယ်ကိုဟော စမ်းသပ်ပြုလုပ်ခြင်းအစီရင်ခံစာ။
သစ်အလေအလွင့်မှ အက်သနော ( Wood Alcohol) စမ်းသပ်ပြုလုပ်ခြင်း အစီရင်ခံစာ။
လွှာစာမှုန့်မှ အောက်ဇာလစ် အက်ဆစ် စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ခြင်း အစီရင်ခံစာ။
၁။ 3094 Bio Fuel ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း အတွက် အသုံးဝင်သော Mesoporous Silica Nanoparticles များစမ်းသပ်ပြုလုပ်ခြင်း သုတေသနလုပ်ငန်း အစီရင်ခံစာ။
Silver Nanoparticle စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ၎င်း Silver Nanoparticleကို အသုံးပြု၍ရေသန့်စင်ခြင်း တွင် အသုံးပြုနိုင်သော Water Filter စမ်းသပ်ပြုလုပ်ခြင်းသုတေသနလုပ်ငန်းအစီရင်ခံစာ။
တိုင်တေနီယမ်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်နာနိုအမှုန့်များ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ၎င်း အမှုန့်များဖြင့် Gas Sensor ပြုလုပ်ခြင်း။
ချည်ထည်ဆေးဆိုးခြင်းမှ ထွက်သောရေဆိုးရေညစ်များ ကို တိုင်တေနီယမ်ဒိုင် အောက်ဆိုဒ်-ဇီအိုလိုက်နာနိုကွန်ပိုစစ်အသုံးပြု၍ သန့်စင်ခြင်းသုတေသနလုပ်ငန်းအစီရင်ခံစာ
Zinc Oxide နာနိုအမှုန့် များကို သနပ်ခါးများကို သနားခါး တွင် ထည့်သွင်းပြီး‌ နေရောင်ခြည် ကာကွယ်ပေးနိုင်မှုလေ့လာခြင်း။
၂။ 3052 Nd: YAG Fiber Laser Ablation နည်းစဥ်အသုံးပြု၍ Chemical Sensor တွင် အသုံးပြုနိုင်သော Copper နှင့်Copper Oxide နာနိုအမှုန်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း။
၃။ 3050 လယ်ယာမြေများ ပျက်စီးခြင်းမှ တားဆီးပေးနိုင်သော ‌မြေဆီထိန်း သြဇာ ( Soil Conditioner ) စမ်းသပ်ပြုလုပ်ခင်းသုတေသနလုပ်ငန်း အစီရင်ခံစာ
၁။ 3054 မင်းဂွတ်သီး လ္ဘက်ရည်မှုန့် (Mangosteen Tea) စမ်းသပ်ပြုလုပ်ခြင်း သုတေသနအစီရင်ခံစာ။
၂။ 3053 ဟင်းချိုမှုန့်အစားထိုး ငါးဟင်းခတ်မှုန့်စမ်းသပ်ပြုလုပ်ခင်း သုတေသန အစီရင်ခံစာ။
၃။ 3026 Nutrition Rice Milk Production အာဟာရဓါတ်ကြွယ်ဝသော ဆန်နု စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ခြင်းအစီရင်ခံစာ။
၄။ 3000 အရိုး၊ မျက်စိ နှင့် ဆီးချိုသွေးချို အတွက် ဖြည့်စွက်အစာ စမ်းသပ်ထုတ်လုပ် ခြင်းသုတေသန။
၅။ 2977 Instant wearing food အသင့်စားသုံးနိုင်သော ကလေးအာဟာရမှုန့် ထုတ်လုပ်ခြင်း သုတေသန။
၆။ 2936 Processing of improved glazed papaya (အရည်အသွေးလှပသော ကြာရှည်ခံ သဘာဝ သီးတုံးကလေးများ) စမ်းသပ်ပြုလုပ်ခြင်း သုတေသနအစီရင်ခံစာ။
၇။ 2928 Preparation of Juice Clarifying Agent စမ်းသပ်ပြုလုပ်ခြင်း သုတေသန။
၈။ 2927 Mango Nectar စမ်းသပ်ပြုလုပ်ခြင်းသုတေသန။
၉။ 2926 Mango Juice စမ်းသပ်ပြုလုပ်ခြင်းသုတေသန။
၁၀။ 2914 Semi-moist mango preserved စမ်းသပ်ပြုလုပ်ခြင်းသုတေသန။
၁၁။ 2913 Mango candy စမ်းသပ်ပြုလုပ်ခြင်းသုတေသန။
၁၂။ 2912 Mango bar စမ်းသပ်ပြုလုပ်ခြင်းသုတေသန။
၁၃။ 2909 Candied Osmodehydrated Candy Carambola (Osmodehyd nated) နည်းစဥ်ဖြင့် စောင်းလျားသီး ပြုလုပ်ခြင်း
၁၄။ 2892 အသီးအနှံများအား မပျက်စီးဘဲ အချိန်ကြာမြင့်စွာထားနိုင် ရန် ပြုလုပ်ခြင်း သုတေသန လုပ်ငန်းအစီရင်ခံစာ။
၁၅။ 2846 ပဲနို့မှုန့် စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ခြင်း အစီရင်ခံစာ ( ၁၉၉၉-၂၀၀၀)
၁၆။ 2846 ကောက်ရိုးမြေဆွေးတွင် ရှိသော ဇီဝပိုးများကို အသုံးပြု၍ ကောက်ရိုးအမြန် ဆွေးနည်းအား ဆောင်ရွက်ခြင်း။
၁၇။ 2445 အာဟာရမှုန့် (Predigested Weaning Food) ကို စမ်းသပ်ပြုလုပ်ခြင်း
စပျစ်သီးမှ စပျစ်ဝိုင်စမ်းသပ် ပြုလုပ်ခြင်းသုတေသန။
သစ်သီးဖျော်ရည်ပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ( Pectinase) အင်ဇိုင်းကို Aspergillus nier မှိုမှ စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ခင်းသုတေသနအစီရင်ခံစာ။
ပဲပုတ်စေ့မှ ဆီထုတ်ယူခြင်း နှင့် ဆီထုတ်ပြီး ပဲဖတ်ကို အသုံးချမှုနည်းလမ်းများ ရှာဖွေခြင်း သုတေသန
Sterilized Liquid Coffee စမ်းသပ်ပြုလုပ်ခြင်း အစီရင်ခံစာ
သီဟိုသရက်စေ့ထုတ်ယူခြင်းနှင့် ကြာရှည်ခံ ထားနိုင်မှု သုတေသန
Breakfast Juice ပြုလုပ်ခြင်းသုတေသန
၁။ 3045 Vertical Axis Wind Mill တည်ဆောက်ခြင်းသုတေသန အစီရင်ခံစာ။
၂။ 3037 Wind/ Solar Hybrid Generating System
၃။ 3036 Power Factor Correction with Surge Protector Equipment တည်ဆောက်ခြင်းသုတေသန လုပ်ငန်းအစီရင်ခံစာ
၄။ 3035 Moisture Meter ( for Grain) ပြုလုပ်ခြင်း
၅။ 3034 Microcontroller Based Solar Charge Controller
၆။ 2992 စီးပွားရေးတွက်ခြေကိုက်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လျှပ်စစ်ထုတ်စက် စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ခြင်း။
၇။ 2969 Solar Stove စမ်းသက်တည်ဆောက်ခြင်း သုတေသနလုပ်ငန်း
၈။ 2956 Refrigerated for Paddy Dryer တည်ဆောက်ခြင်း သုတေသန။
၉။ 2954 Water Hydrolyses တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ၎င်းမှထွက်ပေါ်လာသော ဟိုက်ဒြိုဂျင် ဓါတ်ငွေ့ကို 5.6 Hp Diesel
၁၀။ 2929 Single Phase to Three Phase Static Converter
၁၁။ 2925 Compossion And Testing of Wind Turbines with Various Lengths of Composite Blades and Generator Types
၁၂။ 2897 Wind Turbine သုတေသန အစီရင်ခံစာ။
၁၃။ 2873 Improved Solar Food Dryer သုတေသနပြု တည်ဆောက်မှု အစီရင်ခံစာ။
၁၄။ 2693 150 Watts Wind Charger Project
၁၅။ 2622 Construction and Experimental Test of Bax-Type Solar Cooker
၁၆။ 2444 နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဆန်စပါးအခြောက်လှန်းကိရိယာ တည်ဆောက်စမ်းသပ်ခြင်း သုတေသန အစီရင်ခံစာ။
အလုပ်ရုံသုံးသံဂဟေထပ် ဆက်ကိရိယာ (Sopot Welder) တည်ဆောက် စမ်းသပ်ခြင်း သုတေသန အစီရင်ခံစာ။
၁၇။ 1912 Solar Hot Air Dryer နေရောင်ခြည်လေပူအခြောက်လှမ်းကိရိယာ တည်ဆောက် စမ်းသပ်ခြင်း သုတေသန အစီရင်ခံစာ။
၁။ 3030 Flame Sprop Pyrolysis နည်းစဥ်အသုံးပြု၍ Zno နာနိုအမှုန့်များ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ၎င်းတို့၏ ထူးခြားသောသွင်ပြင် လက္ခဏာများကို လေ့လာခြင်း။
၂။ 3007 ခနောက်စိမ်းပါဝင်မှု အဆင်မြင့်တင်ခြင်း၏ အကောင်းဆုံး အခြေနေ ရရှိရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း။
၃။ 3006 Synthesis of Cerium Oxide Nanoparticles and its Application as Fuel Catalyst
၄။ 2982 Upgrading Antimony Content and its Extraction
၅။ 2968 Ni-Zn Ferrite စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ခြင်း
၆။ 2960 Production of Manganese Zinc Ferrite for Electronics Application
၇။ 2959 Testing on Production of Zirconia
၈။ 2958 Testing on Production of Sodium Chromate and ….
၉။ 2948 Testing on Production of Carbon brush for electric motors
၁၀။ 2939 Preparation of Sodium Dichromate from Chromate Ore
၁၁။ 2938 Preparation of Sodium Chromate from Chromate Ore
၁၂။ 2838 ကျေးလက်ဒေသထွက်အလေအလွင့်များမှ အုတ် နှင့် အုတ်ကြွပ်( အမိုးပြား) စမ်းသပ်…
၁၃။ 2820 ဓါတ်ခွဲခန်းအဆင့်သံချေးတား သုတ်ဆေး စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ခြင်း။
၁၄။ 2812 အမျှင်ရှိလယ်ယာထွက်ကုန်ကြမ်းတစ်ချို့မှ အစပြား စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ခြင်း အစီရင်ခံစာ
၁၅။ 2811 ဓါတ်ခွဲခန်းအဆင့် Semiconductor Solar Cell စမ်းသပ်တည်ဆောက်ခြင်း သုတေသနလုပ်ငန်း။
၁၆။ 2448 Extraction of Metallic Copper from Sulphide Concentrate…..
Processing of Hight Grade Graphite by Column Floatation
Simulataneous Electrowinning of Zine and Electrolytic….
Preparation of Chrome Oxide Green Pigment from…..
Laboratory Testing of Chromite Ore for Sodium Dichromate…